T-Roc Cabriolet cusub oo la soo bandhigi doono markii ugu horreysay ee lagu qabto Frankfurt Motor Show | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAYURUB49 JarmalkaT-Roc Cabriolet cusub oo la soo bandhigi doono markii ugu horreysay ee Bandhigga Gawaarida Frankfurt
19 / 08 / 2019 49 Jarmalka, YURUB, DUNIDA, SAWIRADA, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, baabuurta
t Roc cabriolet cusub oo la soo bandhigi doono markii ugu horreysay showga 'auto furtfurt auto show'
Volkswagen, SUV qoyska reerka guusha leh ee T-Roc, nooca Cabriolet ee Frankfurt Motor Show markii ugu horeysay (IAA) waxay isu diyaarineysaa inay soo bandhigto.
Iyada oo muuqaalka adduunka ee T-Roc Cabriolet, Volkswagen uu weli hal-abuur kale u keenayo fasalka SUV. 12-22 T-Roc Cabriolet cusub, oo marka ugu horeysa lagu soo bandhigi doono Frankfurt Motor Show (IAA) laga bilaabo Sebtember, waxaa loo qorsheeyay in laga bilaabo Yurub guga 2020.
T-Roc Cabriolet, Volkswagen moodelkiisii ​​ugu horreeyay ee furfuran ee qaybta SUV ee is haysta, wuxuu bixiyaa isku-dhaf guul leh oo naqshad bannaanka ah, kuraasta sarreeya, dabacsanaanta iyo raaxeysiga wadista sare, dabeecadaha moodooyinka SUV.
Sii wadida caado: Saqafka jilicsan
T-Roc Cabriolet wuxuu sii wadaa caadada saqafka jilicsan ee caadiga ah kadib Beetle iyo Golf. Saqafka buuxa ee si otomaatig ah ayaa u furma sagaal ilbiriqsi oo keliya oo waa la furi karaa waana la xiri karaa halka gaarigu u sii socdo xawaare ilaa 30 km / saac.
Walxaha nabdoonaanta ee loo malaynayo inay ku yaalliin faahfaahinta ugu yar
Rakaabka ku safraya T-Roc Cabriolet waxaa ilaaliya nadaam ilaalin ah oo lagu dheereyn karo gadaasha kuraasta dambe. Nidaamku wuxuu kor uga boodayaa madaxa dambe ee kursiga gadaal aad u yar waqti aad u yar haddii xawaaraha dambe ee xawaaraha ama rabitaanka gaariga la dhaafo. Intaa waxaa u dheer, T-Roc Cabriolet waxaa loogu talagalay qaab dhismeedka windshield xoojin ah iyo qaabab kale oo wax laga beddelayo si loo hubiyo nabadgelyada ugu badan.
"Joogto internetka ah" iyo Digital Cockpit
Nidaamka ikhtiyaariga ah ee jiilka dambe ee macluumaadka (MIB3), oo ka dhigaya khadka internetka ee Cabriolet marwalba, wuxuu awood u siinayaa gaariga inuu lahaado adeegyo iyo howlo cusub. Nidaamka cusub waxaa ka mid ah unug isku xirnaanta onlayn ah, oo ay ku jiraan isku dhafan eSIM. Taas macnaheedu waa in mar haddii darawalka iska diiwaan geliyo nidaamka Volkswagen, Cabriolet uu si joogto ah ugu jiri karo khadka tooska ah. Qulqulka macluumaadka waxaa bixinaya muuqaalka inch ee xNUMX inch. Markii lagu daro isugeynta 'inch' 8 inch opsiyonel, soosaarka waxaa lagu abuuri karaa aag isugeyn dijital ah.
Laba xirmo qalab oo kala duwan
T-Roc Cabriolet-ka cusub ayaa laga heli karaa xirmada qalabka 'Style' iyo 'R-Line'. Xidhmada "Style" waxay ku nuuxnuuxsatay naqshadeynta iyo xarrago shaqsiyadeed, halka R-Line ay adkeyneyso isboortiga iyo nashqadeynta naqshadeynta moodada.
Mashiinka TSI oo kufilan
Gawaarida hore ee curyaamiinta T-Roc Cabriolet'da, 1.0 lt TSI 115 PS 6 horay u isticmaal gearbox iyo 1.5 lt TSI 150 PS 7 oo ah matoor batrool laba-awood batrool oo leh xalal laba-xawaare shidaal ah ayaa la heli karaa.
Lafaha xayawaanka Marmaray ayaa lagu soo bandhigayaa matxafka (Video)
Akcaray Tram gaadhi ah ayaa lagu soo bandhigayaa InnoTrans
SIFER 2019 waxay soo bandhigi doontaa tiknoolojiyada ugu dambeeyay ee wadiiqada tareenada
Inci Aku wakiil Turkey carwada Automechanika ee Frankfurt
Continental Shirkadeeda Cusub ee Shirkadda Cusub ee Caasimadda Geneva ayaa muujisay
Frankfurt Show Show
Moodooyinka Volkswagen SUV